သင်၏ Samsung Galaxy S ကိုသော့ဖွင့်နည်း | Androidsis
အောက်ပါသင်ခန်းစာတွင်၊ ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်လိုက်နာမည့်အဆင့်များကိုရှင်းပြပါမည် Samsung Galaxy S နှင့် Samsung Galaxy SII တို့ကိုသော့ဖွင့်ပါ, လုံးဝအခမဲ့နှင့်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက်။ ¿လက်ကိုင်ဖုန်းသော့ဖွင့်ခြင်းရှိမရှိဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့သုံးတော့မည့်လျှောက်လွှာကို၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည် စတိုးဆိုင်ဖွင့်သည်, ၎င်းကိုအတူ Galaxy S Unlock ဟုခေါ်တွင်သည်မှာအရေးကြီးဆုံးမှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင့်အားငါပြောမည့်အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာသည် ငါတို့ Root အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်, ထက်နည်းနှစ်မိနစ်၌တည်၏မည်သည့်အော်ပရေတာအတွက်မဆို၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိပြီးလည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းကိုအာမခံအောက်တွင်ထားရှိပါကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတိရရမည် ဆိုပါတယ်အာမခံချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပယ်လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်၌ကတည်းကလျှောက်လွှာ Galaxy S လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။, ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဖြန့်ချိအောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏အတွင်းပိုင်းစနစ်ဖိုင်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မည်။
ငါတို့လုပ်ရလိမ့်မယ် အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ ဒီအပလီကေးရှင်းမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုလုံးတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ် Wifi ကနေတဆင့် ငါတို့ဒေတာနှုန်းလိုပဲ 3G.
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုအမြစ်တွယ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်ဒီ application က Samsung Galaxy S ကိုသော့ဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Y လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ model ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး GT-I9000.
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ခြင်းအရဤလျှောက်လွှာသည်မိသားစု၏အောက်ပါမော်ဒယ်များအတွက်အလုပ်လုပ်သည် galaxy S:
က galaxy ACE အား
galaxy Note ကို
လိုက်နာရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ပထမ ဦး စွာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအမြစ်တွယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာကို download လုပ်လိမ့်မည် Play Store ကို.
မှန်ကန်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ Galaxy S လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။ ကျနော်တို့ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ် စူပါအသုံးပြုသူအောက်မှာပြထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြလိမ့်မယ် -
ပထမတစ်ခုအနေနှင့်လျှောက်လွှာ၏ဖန်သားပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း option နံပါတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီအဆင့်မှာတော့ application တစ်ခုကိုယ်တိုင် c ကိုလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်EFS ဖိုလ်ဒါလုံခြုံရေးမှ opiaကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည့်ဖိုင်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည် IMEI.
ဤအဆင့်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ မတော်တဆဖျက်ပစ်လိမ့်မည်, အရန်ကူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ အမြစ်ကျနော်တို့အဓိကပြproblemsနာမရှိဘဲပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဘူး။
လာမည့်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော Android ဗားရှင်းနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောရွေးစရာကိုရွေးချယ်ရမည် နံပါတ်နှစ်နှင့်အတူမှတ်သားနှစ်ခုရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
ကျနော်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ဆိုပါက Eclair သို့မဟုတ် Android ၂.၁နံပါတ်နှစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပထမဆုံးရွေးစရာကိုရွေးပါမယ်။
ကျနော်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ဆိုပါက Froyo သို့မဟုတ် Gingerbreadအတူတူပါပဲ၊ အန်းဒရွိုက် 2.2 y အန်းဒရွိုက် 2.3 ကျနော်တို့နံပါတ်နှစ်နှင့်အတူမှတ်သားဒုတိယ folder ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
အသင့်တော်ဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် ဘာမှမထိဘဲစောင့်နေမယ်ဖုန်းသည်မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်နှင့်နေမည်၊ ထူးဆန်းသည့်အရာများကိုပင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာမှမထိဘဲစောင့်နေလိမ့်မည် ဖုန်းကသူ့ဟာသူ reboot.
တခါ Galaxy ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်လျှောက်လွှာကိုပြန်ဖွင့်ပြီး၊ option နံပါတ်သုံးအောက်မှာပြထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြလိမ့်မယ် -
OK ကိုနှိပ်ပါ နှင့်ဖုန်းသည်သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပြန်စလိမ့်မည်။
ယခု ငါတို့ပြီးသားလွတ်ပြီ မှန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ် S မိသားစု de Samsung, အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဆင်းကဒ် အခြားမူရင်းအော်ပရေတာများမှဖုန်း၏မူလ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကမှော်သဘောဖြင့်အတည်ပြုပြီး၊ ကဒ်ကိုလက်ခံကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်ကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာ၏စတုတ္ထအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် ကွဲလွဲချက်များမဆိုအမျိုးအစားကိုသတိထားမိထိုကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ကွန်ယက်နှင့်မချိတ်ဆက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုမှုများမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ Bluetooth အလုပ်မလုပ်ပါ ဆက်သွယ်မှု ဒီရွေးချယ်မှုသည်အဘို့ဖြစ်၏ EFS ဖိုင်တွဲကိုပြန်လည်ထားရှိပါ.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - သင်၏ Android terminal ကို SuperOneClick ဖြင့် root လုပ်နည်း
ဒေါင်းလုပ် - Galaxy S Unlock
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S နှင့် Samsung Galaxy SII တို့ကို Galaxy S Unlock ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
137 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အခွင့်အလမ်းမရှိဘူး။ EFS ကိုကူးယူတဲ့အခါအမှားလုပ်မိတယ်။ ငါမှာနဂါးငွေ့တန်း S2 ရှိတယ်
Coco Sili သို့ပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါсуперကိုကလစ်နှိပ်ပြီးအမြစ်တွယ်တယ်။ အကြံပြုချက်မဆို။
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကြောင့်ဤမျှလောက်မများပါကကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုထုတ်ဝေရန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသောအရာများသည် ICS သို့၎င်းကို update လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနား ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုအိုင်ကျူနိမ့်သူများကစီမံသည်။
Nokia နှင့်သင်“ ထုတ်ကုန်ကုဒ်” ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ Android နဲ့ဆင်တူလား။
ICS သို့မွမ်းမံရန်ဖြန့်ချိရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုအမြစ်တွယ်ပြီး Recovery ကိုထည့်သွင်းရန်ဤသင်ခန်းစာကိုလိုက်နာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် vodafone ics2နှင့် sgs4.0.4 အသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ ၎င်းကို galaxy s unlock ဖြင့်သော့ဖွင့်နိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်သိပါသလား။ ငါ galaxy s2 sim unlock ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီး၎င်းသည်ငါ့ကိုသော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအခြား sim တစ်ခုကိုထည့်သောအခါ၎င်းကိုမတောင်းဆိုပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုသော့မဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို ICS နှင့်အတူကြိုးစားခဲ့ပါသလား
HELLO FRANCISCO ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းကိုသော့ခတ်နိုင်ခြင်း၊ စပိန်မှအိုင်တီကိုယူဆောင်လာခြင်းနှင့်အိုင်ပက်ကိုယူဆောင်လာခြင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ SIM ကွန်ယက်ကိုသော့ဖွင့်ခြင်း PIN နံပါတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်နားလည်နိုင်သည်ကိုမသိပါ။
ကွန်ယက်မရရှိပါ၊ sim lock status, imei null / null … samsung gt i9003 တွင်။ ငါလွှတ်ပေးရန်ပြissueနာဖြစ်လျှင်, ငါဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်!
ICS 4.0.4 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား?
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မကြိုးစားခဲ့ပါ၊ သို့သော်မည်သည့်အရာမျှမကြိုးစားနိုင်ပါဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ၊ တူညီသောသတင်းစကားများထွက်မလာပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုအခြားကုမ္ပဏီမှအခြားကဒ်တစ်ခုဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး perfect ပြီးပြည့်စုံမှု😉
12/08/2012 22:20 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Fredd ၂၄ ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ICS CREAM အသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်၊ ဒုတိယအဆင့်တွင်သင့်အားမည်သည့်ရွေးချယ်မှုပေးမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါထင်တာကတော့ဒီ application ကို update လုပ်ထားပြီး Android version ကိုရွေးချယ်စရာမလိုတော့ပဲနံပါတ် ၂ ကိုရွေးရုံပါပဲ။
မည်သူမဆို S Plus အားဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား။
ကျွန်ုပ်သည် S Plus အားကျွန်ုပ်သော့ဖွင့်နိုင်သလားသင်မသိသောပြsameနာတစ်ခုတည်းရှိသည် မင်းအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ငါ့ဖုန်းက ၁၀ မိနစ်ယူတယ်။ ဒုတိယအဆင့်ကိုလုပ်ပြီးနောက်ဖန်သားပြင်အနက်ရောင်နှင့်အတူဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ????????
သင်ဖြေရှင်းပြီးပြီလားသင် root user တစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်လား?
ငါ 1 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကငါ့ကိုအမှားတစ်ခုလို့ပြောရင်၊ မသိမ်းဆည်းသေးဘူး၊ နံပါတ် ၂ လည်းမရှိဘူး၊ ၁ မှာ ၁ ။
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်တာ ၁၀ မိနစ်ကျော်ကြာတယ်၊ အနက်ရောင်ဖန်သားပြင်ကထွက်မလာဘူး
မေလ _၁၀၀ မူလ ဟုသူကပြောသည်
ami က Efs ၏ဖိုင်တွဲတွင်အရန်မလုပ်ပါ။ Error Not Save »
Dave gomezmerino ဟုသူကပြောသည်
root user ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ ဒါဘယ်လိုပြီးပြီလဲ
Dave Gomezmerino အားစာပြန်ပါ
၎င်းသည်ဘာမျှမထိုက်တန်ပါ။ sgs unlock ကို blackmart တွင်အခမဲ့သုံးနိုင်သည်
root အသုံးပြုသူအားထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် unlock_s galaxy ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်အက်မင်အဖြစ်ဖွင့ ်၍ မိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
unlock_s galaxy သည် galaxy s plus တွင်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသော်လည်း
Ivo ဂျာမန် Sparvieri ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ဘယ်လိုလဲ? ဒီနည်းလမ်းကကောင်းပါတယ် ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုငါဆဲလ်ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်ငါကနောက်တဖန်ပိတ်ဆို့ချင်ပါသလား, သင်မေးပါ။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ivo Germán Sparvieri အားစာပြန်ပါ
ဖုန်းရှိမည်သည့်ဒေတာပျောက်ဆုံးပါလဲ? အဆက်အသွယ်များ၊ sms များ၊ ပုံများ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ ဆက်တင်များ ...
မူအရမဟုတ်ပါ၊ Galaxy S2 နှင့် Galaxy SXNUMX တော်တော်များများကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီ။ ဘာမှမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်အားအဆင့် ၁ ကိုပင်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ သင်ညွှန်ပြသည့်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ။ option ၁ မှာအမှားလုပ်မိပြီးပြင်ပကဒ်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ၊ အခုမျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ဖြစ်နေပြီ၊ ၁၅ မိနစ်ကျော်သွားပြီ၊ option ၂ ကိုနှိပ်မထားဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖုန်းကအလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားလို့မတော်တဆနှိပ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုဘာလုပ်လို့ရလဲ။ ငါကသော့ဖွင့်လိုက်ပြီး၎င်းသည်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်အောက်သို့ရောက်ရှိနေပြီးအထက်အဆင့် status bar မှာ 1g အချိန်နှင့်ပေါ်လာသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
မင်္ဂလာပါ၊ သင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ။ ပထမဆုံးကျွန်တော်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်ပြီးပါပြီ။ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် optional 1 မှာမပါတဲ့ galaxy S သို့သွားသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုဖြစ်စေပြီးပြင်ပအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကဒ် (လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုအနက်မည်သည့်အရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်မသိသည်) ယခုမျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ဖြစ်နေပြီ၊ မိနစ် ၃၀ ကြာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရွေးစရာ ၂ ကိုမနှိပ်မိသေးသော်လည်းဖုန်းသည်အလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားခြင်းကြောင့်မတော်တဆနှိပ်မိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သော့ဖွင့်သောအခါငါဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါကသော့ဖွင့်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်အတိုင်းလိုက်သည်၊ အထက် status bar မှာလွှမ်းခြုံမှု၊ အချိန်၊ 30g နှင့်အတူပေါ်လာမည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့သူကအစီအစဉ်ကတုန့်ပြန်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်၊ ငါကပိတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ဒါကနှေးနေတုန်းပဲ။ ပြန်ဖွင့်ပြီးပြင်ပကဒ်မှဖိုင်များပေါ်လာပါပြီ။ :) အခုပုံမှန်အမြန်နှုန်းကိုသွားသည်။ ခဏ၊ မနက်ဖန်တွင်ငါထပ်မံကြိုးစား ဦး မည်။
ကောင်းသောည, ငါနောက်တဖန်ကြိုးစားခဲ့နှင့်မီးစာမအောင်မြင်ပါ။ ငါအမှတ် 1 မရနိုင်ဘူး၊ ငါ့ကိုမကူးဘူး US ဗားရှင်းကသင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောနေရာနှင့်ကွဲပြားသောသော့ဖွင့်ခြင်းက ၄ င်းသည်ကျိုးပဲ့နေပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် busybox ဖြစ်သည်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် busybox နှင့် titanium backup အချို့ရှိသည့်ပြproblemsနာများရှိနိုင်ကြောင်းသတိပေးသည်။ ငါအမှတ် ၁ မတိုင်မီ unlok ကိုသွားလျှင်၊ အခြားရွေးစရာတစ်ခုပေါ်လာမည်၊ ကျွန်ုပ်နှိပ်ရမည်လား? sim unlok ကုဒ်ကိုကြည့်ပါ
ဖုန်းကို root လုပ်ထားဖို့လိုပြီး updatebox ရဲ့ updatebox နဲ့ဆိုရင်တော့အဲဒါကသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
မင်္ဂလာည၊ အဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ busybox မှာတွေ့ခဲ့ရင် titanium backup ကိုကူးယူလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့ busybox ကိုဘယ်လို install ရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ android version 2.3.4 gigerbread ကြောင့် အဲဒါနဲ့လုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါသလား သငျသညျအကြှနျုပျကိုလိုက်ရန်ခြေလှမ်းများပြောပြစိတ်ထဲမလား? ငါငါးအနည်းငယ်သွားပါ။
Play စတိုးထဲသို့ ၀ င်ပြီး Busybox ကိုထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းကိုအခြား sim နှင့်စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။
ငါမှတ်မိသည်မှာမိုဘိုင်းသည်အမြစ်တွယ်နေသည်။ ငါ superuser icon ကိုရသည်။ ငါအခြားမှတ်ချက်တခု၌ပြောခဲ့သကဲ့သို့ galaxy unlok S တွင်မြင်ရသောမျက်နှာပြင်သည်သင်ဒီမှာပြသထားသည့်ပုံစံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်တာကြောင့်မိုဘိုင်းကိုမဖွင့်နိုင်တာကမင်းရဲ့အကူအညီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကအဲဒါကိုအခမဲ့လို့ထင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေကဒ်ကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့အဲဒါကမဟုတ်ဘူး။
ငါ SGS unlok ကိုလည်းကြိုးစားကြည့်ပြီး၎င်းမှာကုဒ်တွေမရှိဘူးလို့ပြောပြီးငါမှာ galaxy s ရှိသလားလို့မေးတယ်။
ကျွန်ုပ်ဆီမှငါ့ကိုဆီသို့ပို့လိုက်သော galaxy s samung နှင့်ပြproblemsနာများရှိသည်။ သူတို့ဖြန့်ချိပြီးကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်နီးပါးအသုံးပြုခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခုချက်ချင်းပင်ကဒ်ပြား၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် msm အဆက်အသွယ်များစသည်တို့ကိုလက်ခံခြင်းမပြုတော့ပါ။ နည်းပညာလို့ထင်ရပေမယ့်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ တေးဂီတစသည့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဖျက်ပစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
Raul sampedro ဟုသူကပြောသည်
ငါညွှန်ပြသည့်အဆင့်များကိုငါလိုက်ခဲ့ပြီးပြီ။ * # 7465625 # ကုဒ်ကိုတောင်မှကွန်ယက်သော့ခတ်ပိတ်ထားကြောင်းငါ့ကိုပြောပြသည်
မူလကုမ္ပဏီနှင့်အတူဖုန်းသည်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ အခြားအော်ပရေတာတစ်ခု၏ SIM ကိုကျွန်ုပ်ထည့်သောအခါသူက၎င်းကိုမှတ်မိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ဆိုမှုများပို့ရန်သို့မဟုတ်လက်ခံရန်ခွင့်မပြုပါ။
Raul Sampedro အားပြန်ပြောပါ
သင်၌ရှိသောဖုန်းပေါ် မူတည်၍ နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ဟုဘလော့ဂ်တွင်ကြည့်ပါ
မင်္ဂလာပါ သူတို့ကငါ့ကို samsung galaxy s plus ကိုပေးလိုက်တယ်။ ငါဒီမှာဖြည့်ချင်တယ်။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကငါခြေလှမ်းတွေကိုလှမ်းလိုက်မယ်၊ အမြစ်တွယ်နေပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအောင်မြင်ခဲ့ပြီ၊ ထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်၊ busybox ကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမအဆင့်ကငါ့ကိုဘာကြောင့်ပျက်ကွက်တာလဲလို့ငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား။
အကယ်၍ Samsung GALAXY S I9000 ကို IMEI တွင်ပိတ်ဆို့ထားပါက၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
ဒါကခိုးသွားတဲ့ terminal ဖြစ်ပြီးခိုးမှုကိုသတင်းပို့ပြီးမှသာဖြစ်လိမ့်မည်။
သင် imeii သော့ဖွင့်နိုင်လျှင်မင်္ဂလာပါ
ဟုတ်တယ်၊ ပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ imeis ကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့သင်ပြောင်းလိုက်ရင်၊ မိုဘိုင်းမော်ဒယ်တစ်မျိုးတည်းမှာပဲ၊ နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာပဲပြောင်းလို့ရမယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကမင်းကိုဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာရာဇ ၀ တ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ကားကိုယ်ထည်နံပါတ်ကိုကားတစ်စီးပြောင်းတာနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ရင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုခိုးယူခံရတဲ့အပြင်ပြproblemနာမရှိပါဘူး
Juan Ayala ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Samsung Galaxy S ရှိပြီးသူတို့သည်အချို့သောလူများကိုပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်ပြုသည်ကိုသိပြီး ovado အကြောင်းကြားခဲ့ပါသော်လည်းကျောင်းတွင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏သမီးကိုပေးခဲ့သော်လည်းသူမ moviestar ချစ်ပ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုမဖတ်တတ်ပါ။ မင်းရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် naujsolrac_alaya@hotmail.com
juan ayala သို့ပြန်သွားရန်
Fracisco ညနေခင်းဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အခါကျွန်ုပ်၏ i9000 s တွင်ပြproblemsနာများရှိသည်
မီတာကမသိရဘူး။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ မင်းငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား
ငါမှာ telcel ရှိ samsung galaxy ace 5830L ရှိသည်။ သူတို့သည်ငါ့ကိုလွှတ်ပေးရန်စက်ကိရိယာများကိုပို့ပေးသည်။ (ငါ iusacell ကိုစိတ်ဝင်စားသည်) ၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းသည်။ သို့သော် ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်မျက်နှာပြင်ကအံ့အားသင့်သွားပြီးပိတ်သွားသည်။ နှင့်အဆက်မပြတ်ပေါ်တွင်ငါဒီအခြေအနေကိုရှောင်ရှားရန်ငါဘာလုပ်ရမှန်း, သင်၏အသိပညာများအတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်ဂုဏ်ပြုလွှာသိလိုပါတယ်
ကျွန်ုပ်တွင် galaxi ace 5380 ဆဲလ်ဖုန်း ရှိ၍ ၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံမှယူဆောင်လာပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း
မီလ်တန် alvarado ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ဆီမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလာရောက်ပို့ဆောင်သော SAMSUNG GALAXY SII ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအယ်လ်ဆာဗေးဒေါတွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ပါသလား။ ၎င်းကို CLARO ကုမ္ပဏီနှင့်ဖွင့်ချင်သည်။ ဒီဖုန်းကို at & t နဲ့ဖွင့်ထားတယ်။ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အယ်လ်ဆာဗေးဒေါမှ Milton Alvarado
Milton Alvarado သို့ပြန်သွားပါ
ငါ Rom install လုပ်ရှိသည်
Samsung Galaxy S၊ Creed Rom V10 Android 4.2
ငါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Galaxy S ကိုသော့ဖွင့်လို့ရမလား။
ငါသေချာအောင် JVU Android 2.3.6 ကနေလုပ်လိမ့်မယ်
မင်္ဂလာပါ !! Samsung Galaxy SCL အတွက်အလုပ်လုပ်လားသိလား။
ကံမကောင်းစွာပဲ ICS 4.0.4 မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ၄.၀.၄ သို့ဆင်း။ ထပ်မံကြိုးစားပါကမှားပါသလား။
ကောင်းသောညပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ Galaxy S i9000 ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဒေတာဆက်သွယ်မှုဆုံးရှုံးသွားပုံရသည်။ ၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်မှတဆင့်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်ထပ်တူပြုခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်ကိုလုပ်ချင်သောအရာများကိုလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား။
ဟေးဒါပေမယ့်ငါသူဌေးကိုသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမယူလာခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကပိတ်ဆို့လိုက်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုမေးတယ်ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိဘူး၊ ငါ့ကို fab များအတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုပေးခြင်း၏ကျော်ကြားမှု
မင်းမှာဖုန်းဘယ်ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြပါ ဦး ။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Samsung Galaxy S i-9000 သည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းတယ် ဖုန်းကို root လုပ်ပြီး Busybox၊ unlock နှင့်ဖုန်း၊ galaxy S တို့ကို install လုပ်ပြီးနောက်အဆင့် ၂ သို့သွားပြီးအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့် ၅ မိနစ်ကြာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ??????? ' ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မိုဘိုင်းကို pc သို့ချိတ်ဆက်သောအခါကျွန်ုပ်တွင်ပြansနာတစ်ခုရှိသည်။ သူသည် sansung android ပေါင်းစပ် adb interface နှင့်ပြproblemsနာရှိကြောင်း၊
ကောင်းတယ်မိုဘိုင်းကို pc နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါပြသနာတစ်ခုရှိတယ်
sansung android ပေါင်းစပ် adb interface ကိုတပ်ဆင်။ မရပါ
Infinium နိုင်ငံသား ဟုသူကပြောသည်
Francisco က…ဒီနည်းလမ်းကို Samsung Galaxy I9001 နဲ့သုံးလို့ရလား။ ငါနဂါးငွေ့တန်း S ပေါင်း ... လို့လည်းထင်တယ်
Infinium Citizen မှစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ sansungalaxi s ကိုလွှတ်ပေးရန်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကူညီလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားဖုန်းနံပါတ်ကြိုတင်နှုတ်ခွန်းဆက်နိူင်လျှင်တစ် ဦး တစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနံပါတ် 635 41 55 54 ကျွန်ုပ်၏အမည် Enrique ကိုထပ်မံကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒီနေရာမှာ Androidsis ပေါ်မှာသင်ခန်းစာအပြည့်အစုံရှိတယ်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy s plus ကိုလွှတ်ပေးရန်ကြိုးစားသည်။ busybox v1.20.2 ကို install လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုဖြစ်စေပြီး EFS Unlock တွင် EFS ရေးသားစဉ်ကအမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအကူအညီလား
နည်းလမ်းမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Play Store ၌ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပေါ်နေသော busyboxes2ဖြင့်ကြိုးစားပြီး Efs Folder ကိုမှတ်တမ်းတင်သောအခါကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးလှူဒါန်းပါ။
ဟစ်ဖနီကို၊ အမြစ်စွဲရင် Galaxy S Unlock ကိုဒေါင်းလုတ်မပြီးမချင်းငါလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပထမဆုံးရွေးလိုက်တာနဲ့ထွင်းလိုက်တာကငါ့ကိုအမှားပေးလိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် Error, Not Saved လို့ပြောတယ်။
ဘယ် Android ဗားရှင်းကိုသင်သုံးနေသလဲ။
firmware ကိုဗားရှင်း 2.3.5
ဒါဟာသင့်အတွက် root အလုပ်မလုပ်တာအံ့သြစရာပါပဲ၊ ဘယ်လို root လုပ်ခဲ့သလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ မင်္ဂလာနေ့၊ သင်ခန်းစာအရအမြစ်တွယ်ပါ။ SuperOneClik ကို PC ပေါ်တွင် download လုပ်ပါ၊ USB မှတဆင့်မိုဘိုင်းကိုချိတ်ဆက်ပါ၊ ဖွင့်ပါ။
ဖရန်စစ်စကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် SuperOneClik နဲ့ root လုပ်ရင်ဘယ်လိုပြန်လွှတ်နိုင်မလဲ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။
superuser App ကိုသွားပြီး၎င်းကိုဖြန့်ချိရန် application တွင် root permissions ခွင့်ပြုထားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
15/04/2013 09:27 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဟိုက်စစ္စကို၊ superuser app ကိုငါဖွင့်လိုက်ပြီ။ applicationbox နှစ်ခုပေါ်လာသည်။ busybox pro နှင့် galaxy s unlock သည်ခွင့်ပြုထားသည်အတိုင်း၊ root permissions များကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်ကိုငါမသိ။
Francisco, ငါ galaxi s ကိုသော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ superuser permissions ကိုခွင့်ပြုထားပြီဟုပြသောသေးငယ်သည့်ပြတင်းပေါက်လေးတစ်ခုပေါ်လာသည်။ unlock tab ကိုအထွတ်အထိပ်၊ အဆင့် ၁ ကိုပြောလိုက်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ “ လှူဒါန်းပါ။ အမှားမသိမ်းဆည်းပါ။ »
မင်္ဂလာနံနက်စောစောဖစ္စကို၊ IMEI မှ samsung galaxy S Plus GT-I9001 အတွက်သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုတောင်းခဲ့ပြီးဖြန့်ချိခဲ့ပုံရသော်လည်းအခြားအော်ပရေတာတစ်ခု၏ sim ကိုထည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အင်တာနက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာမျှမဆက်သွယ်ပါ။ movistar ကထပ်ခါထပ်ခါထပ်မံဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ သင်ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား။ ကျွန်တော့်မေးလ်က pdlfp@hotmail.com.
သင် IMEI ကိုဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်ဖုန်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 9ပြီလ ၂၆ ရက်ညနေ ၅း၃၆ တွင်၊
ဟီဖစ္စကို၊ ကျွန်ုပ် IMEI မဆုံးရှုံးပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ဤတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်မနေ့ကဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်သောကြောင့်အလုပ်လည်းလုပ်ပါသည်။ * # 7465625 # အက္ခရာကိုလိုင်းဖွင့်ထားပါကအရာရာအားလုံးပိတ်နေသည်ကိုကြည့်ရန် အဲ့ဒါမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး၊ အော်ပရေတာအသစ်ကိုမမှတ်မိသလိုပဲ။
သင်၏ IMEI သည်မူလဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။
IMEI သည်ဘက်ထရီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးဖုန်းတွင်လည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး။ 351722059013585
ကောင်းပြီ, ထို့နောက်သူသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပျံသန်းမှုစနစ်သို့ဝင်သွားပြီးသင်ထွက်ခွာသွားသည်။ သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်ရှိနေသည့်နေရာ၌အကျုံးဝင်မှုမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်အခြားတစ်နေရာသို့ သွား၍ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါကသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်
ငါအဲဒါကိုလေယာဉ်ပျံပုံစံထဲမှာထားလိုက်တယ်။ ငါမှာလွှမ်းခြုံတယ်။ ဒါပေမယ့် H ကကွန်ယက်မှမထွက်လာဘူး။ ဒါကကွန်ယက်ကိုမဖမ်းမိသလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ကပ်လျက်နောက် movistar mobile ရှိတယ်။ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဖြန့်ချိရေးကုဒ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒေတာကွန်ယက်အတွက်သာဖြစ်သော်လည်း APN ကိုပြုပြင်ပါ
ငါ APN ကိုပြုပြင်ပြီးဒေတာကွန်ယက်ကအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တယ်၊ အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ပြီးဒေတာရှိတယ်၊ လွှမ်းခြုံမှုပိတ်ဆို့သွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဖုန်းခေါ်တာ၊ လက်ခံတာ (သို့) မက်ဆေ့ခ်ျတွေပို့တာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မဖြေရှင်းနိုင်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကို (၂) ရက်လောက်အပြီးသတ်ပြင်ဆင်ပြီးပြီ၊ ဖြန့်ချိခြင်းမခံရပါ။ ကဒ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်ကွန်ယက်ကုဒ်ကိုတောင်း။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထံသို့ယူဆောင်လာသည် ငါဖြန့်ချိခဲ့တဲ့တရုတ်ကသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ လက်ကိုင်ဖုန်းကုမ္ပဏီ၏ကဒ်သည်ကြီးကျယ်သောပြreleaseနာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Sebastian Soto ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ CHIP ကိုထားရန် (သို့) မလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
Sebastián Soto အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ။ သင့်အဖြေအတွက် GALAXY S4, … .. ကျေးဇူးတင်ပါသည်အစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SAMSUNG GALAXY S4 ကိုသော့ဖွင့်ရန်လျှောက်လွှာကို သုံး၍ ရနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည်ယူအက်စ်မှဖြစ်ပြီး၊ ငါပီရူးတွင်ရှိနေသည်။ se သင်အခမဲ့နိုင် ????? .... ။
နဂါးငွေ့တန်း S3 သို့မဟုတ် S4 အတူတူပင်သော့ဖွင့်လို့ရလား။
Mc Andruu ကိုပြန်ပြောပါ
Galaxy S3 သည် S4 ဖြစ်နိုင်သည်၊ အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပေမယ် .... S2 ကို Claro အတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒီ app လေးကိုဘယ်လို download ဆွဲရမလဲ .. galaxy s ကို unlock လုပ်လိုက်ရင် efs ကိုကော်ပီကူးဖို့ ၁ option ကိုပေးလိုက်ရင်အမှားမသိမ်းမိအောင်သတိပေးပါ။ hello crac လို့ပြောဖို့လိုပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်အားဂူဂဲလ်အကောင့်တောင်းဆိုသည့် samsung galaxy gt.s5570l ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုလက်မခံပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
Samsung galaxy S plus (GT-I9001) နှင့်မည်သူမဆို၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်စီမံထားပါသလား။
Hello Francisco! ငါ galaxy s unlock နဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ။ ငါ့ညီကအဲဒါကိုဖြန့်ချိလိုက်ပြီ။ ပြီးသွားပြီဆိုရင်၊ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုထည့်သွင်းပြီးသူကသူမသိဘူးလို့ပြောပြီးကတည်းကကျွန်တော့်အစ်ကိုကကျွန်တော့်ကိုမတိုင်ကြားဘူး။ ဘာဖြစ်မလဲ ငါမွမ်းမံမှုများလုပ်နိုင်လျှင်သင်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားနိုင်မလား? ငါရှိသည်ဗားရှင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါသည် ,,,, ဒါကြောင့်အရာအားလုံးထက်ထက်ပို။ ပြproblemsနာများကိုပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ moon118.it@gmail.com
မင်းကအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်။ ငါအများကြီးလွှတ်လိုက်ပြီ။ ငါအကြိမ်တစ်ထောင်လောက်လန်းတယ်။
ufff ကျွန်ုပ်သည်အခိုးခံရသော sansung galaxy အနိုင်ရရှိပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုပိတ်ဆို့တော့မည်ဖြစ်သည်။ အသင်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
galaxy ကျော်ကြားမှုအတွက်အလုပ်လုပ်တယ် ??
လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိမပြောပာ
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်သည်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ Galaxy model gt-i9000 ကို flash လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အချက်ပြမှုတိုင်းကိုအချက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်မချိတ်ဆက်ပါကစပီကာများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုကူညီပါ https://www.facebook.com/joeyg.elcristotka ငါအယ်လ်ဆာဗေးဒေါမှလာတဲ့ငါ့ရဲ့ Galaxy i9000 အတွက် firmware ဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိဖို့လိုတယ်
မင်္ဂလာပါနဂါးငွေ့တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် prog ရှိမရှိကြည့်ချင်ပါတယ်
ဟဲလိုဆန်စီရိုဆာဆမ်ဆမ် galaxy i9001 ရှိတယ်၊ ငါထုတ်ချင်တယ်၊ ငါ့မှာဗားရှင်း ၂.၃.၆ ဖြစ်တယ်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသည်။
ဟင်ဖရန်စစ်၊ ကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်း (GT-I900 နှင့် android 2.3.6) ကိုဤနည်းလမ်းဖြင့်လွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းကိုလွှတ်လိုက်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော imei သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရလာသည်။ efs ဖိုင်တွဲကိုပြန်ယူသောအခါ၊ terminal သည်နောက်တစ်ခါပျက်သွားပါက၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအားလုံးပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ sim အသစ်ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ၊ ယခုငါလုပ်သည်။ ထို့နောက်မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်စတင်သည်။
နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... XD
ဟင် Francisco၊ ကျွန်ုပ်တွင် s5570L version 2.3.6 ရှိသည်။ ၎င်းကို mini odin ဖြင့် root လုပ်ပြီး zip update ကိုအမည်ပြောင်းသည်။ superuser android ပေါ်လာသည်။ ၎င်းကိုငါဖွင့်သောအခါဘာမှမပြောပါ။ usb အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်သည်။ 1.40.0.0 .XNUMX နှင့် galaxyaceunlock apk
ငါ busybox ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကငါ့မှာ application တစ်ခုမရှိဘူး၊ ငါ့ကို root မလုပ်တော့ဘူးလို့ငါထင်တယ်၊ ငါမှားတာတွေလုပ်လို့လား၊ ငါဖြေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရှည်အဘို့, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများစွာသောလူတွေမှာတူညီတဲ့ပြproblemနာရှိတာကိုသတိပြုမိပေမဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုမတွေ့ရဘူး၊ ငါဟာအမြစ်အသုံးပြုသူဖြစ်တယ်၊ ငါမှာ titanium backup လည်းရှိပြီး၊ busybox ကို install လုပ်တယ်။ ငါဖြန့်ချိတော့သောအခါငါ efs ဖိုလ်ဒါကိုမကယ်တင်နိုင်သည့်အဆင့် 1 မှာနေ, ငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးသည်နှင့်အမှားအလုပ်များ box ထဲမှာဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးပါပြီ, (I ကို ငါစျေးကွက်ထဲမှ2ကိုသုံးပြီး) ငါအမှု၌ရှိသကဲ့သို့, s ကိုသော့ဖွင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ uninstall လုပ်ပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါပြproblemနာကိုခြေလှမ်း 1 ကနေငါ gingerbread နှင့်အတူမိုဘိုင်း t ကို (တက်ကြွကဲ့သို့) မိုဘိုင်း t မှ galaxy s t959v ရှိသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရာအားလုံးအတွက်မင်းအများကြီး hectortor@yahoo.com
Gustavo Morales Herrera နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ sansung galaxi s5 သည်မည်သည့် application မှမဆုံးရှုံးဘဲ movistar သို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိူင်မည်လားဆိုသည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Gustavo Morales Herrera အားပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Galaxy S SCL I9003 ရှိပြီး Galaxy S Unlock prog ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးပါပြီ။ ဖိုင်တွဲ ၂ မှတစ်ခုသာကျွန်ုပ်ရရှိမည်လား။ ဒီကနေကျွန်တော်အထိန်းကရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှဘယ်သူမှမသိဘူးလား။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က sansung galaxy ကျော်ကြားမှု lite gts6790L ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် root နှင့် busybox ရှိသည်။ သို့သော်ပထမအဆင့်တွင်အမှားကိုကျွန်ုပ်ရနေပါသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
ဆဲလ်ဖုန်းအမြစ်တွယ်တယ်ဆိုတာမင်းဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာငါနားမလည်ဘူး။ မင်းရှင်းပြနိုင်မလား။ ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကကုမ္ပဏီအတွက်ပါ။ ငါထုတ်ချင်တယ်။ အခုငါဝိုင်ဖိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်မရှိ sim .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ernesto Sanchez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပြီးကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏တက်ဘလက်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ samsumg galaxy S ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမေ့သွားသည်ကိုကူညီပါ။
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ terminal ကိုပေးဆပ်ပြီးပါကလွှတ်ပေးရန်ကုဒ်ကိုတောင်း။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားမှားယွင်းစွာပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် sony နှင့် sony repairman ကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသော့ဖွင့်နိုင်သောသူကိုကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်နိုင်သည်ကိုမေလကတည်းကကျွန်ုပ်ပါဝင်သည်
Apalabrados, Play Store တွင်အများဆုံး download လုပ်ထားသောဂိမ်း